SAWIRO:-Madaxweynaha Puntland oo Shir ka furay Garoowe - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Madaxweynaha Puntland oo Shir ka furay Garoowe
SAWIRO:-Madaxweynaha Puntland oo Shir ka furay Garoowe
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdillaahhi Deni ayaa furay shirka labaad ee Doodadaha Xagaaga, kaasoo sanadkii labaad lagu qabtay magaaladda Garoowe.
Shirkaan oo ahaa mid ballaaran, waxaa Madaxweynaha ku wehlinaayey Siyaasiyiin uu ka mid yahay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Dowladdii KMG ahyd ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, Madaxweyne Ku-xigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, Goleyaasha heer Faderaal iyo heer dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda dhexe, Aqoonyahano, Cilmi Baarayaal iyo Marti sharaf kale oo isugu jira qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Deni oo khudbad in ka badan 20 daqiiqo socotay shirka ka jeediyay ayaa ku dheeraaday muhiimadda dib u heshiisiintu u leedahay Ummadda Soomaaliyeed, taas oo qayb ka ah arrimaha looga hadlayo Dooda Xagaagan.
“Sharaf wayn bay u tahay Puntland inay kulamada noocaan oo kale ah martigaliso, waxaana ku baaqaynaa kulamada geedi socodka Soomaaliya looga hadlayo inay Puntland aad u soo dhawayso. Waxaana jeclaan lahaa halkaan inaan maanta ka sheego inay Puntland diyaar u tahay inay marti galiso qodobada aadka looga doodo oo mar walba soo noqnoqda oo la yiraahdo maqaamka Muqdisho in Garoowe looga hadlo ayaan soo dhowaynayaa”. Ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa u mahadceliyey Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Puntland iyo Machadka SIDRA oo qabsoomidda Shirka iska kaashaday, waxaaana uu tilmaamay inuu rajo wanaagsan ka qabo inay ka soo bixidoonaan qodobo kayd u noqondoona Ummadda
Previous articleSAWIRO:-Mas’uul hore oo ku geeriyooday qarax ka dhacay Muqdisho
Next articleSAWIRO:-Axmed Madoobe oo la kulmay musharixiintii la tartantay